Xatooyada xogta Ruushka: Duni dahsoon oo ay wax kasta iib yihiin - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaXatooyada xogta Ruushka: Duni dahsoon oo ay wax kasta iib yihiin
Sida ay sheegeen khubaro ammaanka internet-ka ah, xog badan oo gaar ah, ayna kamid yihiin kuwa hay’adaha dowladda Ruushka ayaa la kala iibsadaa maalin kasta.
Kooxaha sida sharci darrada ah xogta u hela ayaa leh qeybo laga heli karo xogta hay’adaha dowladda, sida Adeegga Canshuuraha Federaalka.
“Haddii ay jirto baahida, lacagna laga samayn karo, dabcan waxaa soo baxaya dad doonaya inay fuliyaan hawshaasi,” ayuu yiri Harrison Van Riper oo cilmi-baarista u qaabilsan shirkadda ammaanka internet-ka ee Digital Shadows.
Dalalka oo dhan ayay ka dhacdaa in la dusiyo xogta rasmiga ah. Shakhsiyaadka hawlahaasi ku caan baxay waxaa kamid ah Edward Snowden oo u shaqeynayay Hay’adda Ammaanka Qaran ee Maraykanka (NSA), kaasoo 2013 baahiyay xog ballaaran oo ku saabsan hawlaha basaasidda ee Maraykanka.
“Dhibaatooyinka musuq maasuqa iyo inaanay jirin cid kontoroosha helitaanka xogta ayaa sabab u ah arinkaa,” ayuu BBC-da u sheegay Mark Galeotti oo ka tirsan mac-hadka Royal United Services Institute.
Sanadkii hore, mas’uuliyiinta Holland ayaa baahiyay magacyada dhowr qof oo ay sheegeen inay wax basaasayeen. Magacyadaasi ayaa waxaa laga baaray diiwaanka gawaarida ee dalka Ruushka, kaasoo ay ahayd inay si wanaagsan u xafiddo wasaaradda arimaha gudaha, balse loo dusiyay shirkaddo gaar loo leeyahay.
Waxaa si fudud lagu ogaaday cinwaanka ay shakhsiyaadkaasi ku nool yihiin, kaasoo ah dhismo ay leedahay hay’adda sirdoonka u qaabilsan milateriga Ruushka ee GRU.
Arintaasi ayaa ceeb ku ahayd dal uu hogaamiyo Vladimir Putin, oo mar ahaa sarkaal mukhaabaraadka u shaqeeya, isla markaana ku faana shaqo wanaaga iyo sirta hay’adihiisa wax basaasa.
Haseyeeshee laamaha ammaanka ee Ruushka ayaa wajahaya loollan awood badan. Saraakiisha hay’adahaasi ayaa inta badan hela mushaar aan ku filnayn, waxaana ay ku kabaan iibinta xogta ee suuqa madow.